အသောကရဲ့ အက္ခရာများ-၆ (အပိုင်း-၁) | နတ္ထိ
« အသောကရဲ့ အက္ခရာများ-၅ (အပိုင်း-၂)
အသောကရဲ့ အက္ခရာများ-၆ (အပိုင်း-၂) »
အသောကရဲ့ အက္ခရာများ-၆ (အပိုင်း-၁)
အိမ်ဝေးသူများအတွက် သင်္ကြန်ကာလဟာ ငိုရမလို ရီရမလိုပါ။ လွမ်းလွမ်းမောမောနဲ့ ပိုစ့်တင်တာ ခဏနားမလို့ စိတ်ကူးဖြစ်တယ်။ ဒါနဲ့ အသောကကျောက်စာတွေ ရိုက်ရင်း ဒီစာကြောင်းလေးကို တွေ့တော့ စိတ်ကူးပြောင်းသွားရော။
သ ဗတြ စ ဇနသ အဋ္ဌံ ကရောမိ အဟံ၊
ငါမင်းတရားမြတ်သည် နေရာတကာ အခါခပ်သိမ်းပင် တိုင်းနိုင်ငံသူများ၏့ အကျိူးနှင့်စပ်သော ကိစ္စကို ပြုလုပ်အံ့။
ဒီလိုမျိုး အပီအပြင် ကြုံးဝါးနိုင်မှ ရာဇ-ဘုရင်မင်းတရားမြတ်။
ဒေ၀ါနံ ပိယော ပိယဒသီ ရာဇာ ဧ၀ံ အာဟ, အတိကံတံ အံတရံ နဘူတပုဝံ သ၀ံ ကာလံ အထကံမံ ၀ါ ပဋိဝေဒနာ ၀ါ၊ သေ မယာ ဧ၀ံ ကတံ, သ၀ံ ကာလံ အဒမာနသ မေ အံတေ သြရောဓနမှိ, ဂဘာဂါရမှိ, ၀ဇသိ စ ၀ိနီတမှိ စ ဥယာနမှိ စ သ၀တြ ပဋိဝေဒကာ ဌိတာ အဌံ မေ ဇနသ အဌံ ပဋိဝေဒယံတု မေ’တိ၊ သ ဗတြ စ ဇနသ အဋ္ဌံ ကရောမိ အဟံ၊ ယံ ပိ စ ကိံ စိ မုခတော အာဏာပယာမိ သွယံ ဒါပကံ ဝါ သာဝါပကံ ဝါ, တံ ဝါ ပုန မဟာမာတေဟိ အတိယာယိကေ အာရောပိတံ ဟောတိ, တာယ အထာယ ဝိဝါဒေါ ဝါ နိဈာတိ ဝါ သံတော ပရိသာယံ အနံတရိယေန ပဋိဝေတဗျံ မေ’တိ သဝတြ သဝံ ကာလံ ဧဝံ မေ အာဏာပိတံ၊ နထိ ဟိ မေ တာသော ဥဌာနမှိ အထသံတီရဏာယ ကတဗျံ၊ မတံ ဟိ မေ သဝလောကဟိတံ၊ တသ စ ပုန ဧတံ မူလံ ဥဌာနံ စ အထသံတီရဏာ စ၊ နထိ ဟိ ကံမံတရံ သဝလောကဟိတမှာ၊ ယံ စ ကိံ စိ ပရာကမာမိ အဟံ, ကိံ တိ ဘူတာနံ အနံဏံ ဂဆေယံတိ, ဣဓ ကိံ စိ သုခယာမိ, ပရတြ စ သွဂံ အာရာဓယတု’တိ၊ သေ ဧတာယ အထာယ အယံ ဓံမလိပိ လေခါပိတာ ကိံ တိ စိရဌိတိကံ ဟောတု ဣတိ, တထာ စ မေ ပုတြာ စ ပေါတြာ စ ပပုတြာ စ မေ ပရာကမံတု သဝလောကဟိတာယ၊ ဒုကရံ စ ခေါ ဣမံ အဉ တြ အဂေန ပရာကမေန။ —သောတော၊
မင်းတကာတို့ ချစ်ကြည် လေးစားအပ်၍့ ပိယဒဿီဟု ၀ှဲ့ချီ-ခပ်နှိပ် အရှင်မဟာကဿပ မထေရ်မြတ်၏့ ဗျာဒိတ်တော်ကို ခံယူ-ရရှိသော အသောက မင်းတြားမြတ်ကြီးသည် ဤသို့ မိန့်ခွန်း ပြန်ဆိုလေပြီ၊ နှစ်ဆက် အသက် ကာလများစွာ ကြာလွန်လှသည် တိုင်အောင်ပင် အခါလေးမြင့်စွာ မင်းရေးကိစ္စ ဆိုင်စပ်ရာမည်သည်၎င်း, မင်း၏့ အမိန့်-အာဏာကို သင့်-မသင့် အကြောင်းအကျိုး ပြန်လှန်ပြောကြားခြင်း မည်သည်၎င်း မဖြစ်ပူးခဲ့လေ၊ ထို့ကြောင့်, ငါဘုရင် မင်းတရားသည် ဤဆိုလတ္တံ အတိုင်း အမိန့် ထုတ်ပြန်တော်မူ၏၊ မည်သည့်အခါမဆို, ငါမင်းတရားမြတ် ပွဲးတော် တယ်စဉ်အခိုက်ဖြစ်စေ, မောင်းမဆောင်၌ စံနေတော်မူခိုက်ဖြစ်စေ, မိဘုရားကြီးငယ်နှင့် မောင်းမအပေါင်းတို့ သားဖွားရုံ၌့ သွားရောက်နေခိုက်ဖြစ်စေ, ခရီးယာယီ ထွက်စံ လှည့်လည်ခိုက်ဖြစ်စေ, ဥယျာဉ်တော်၌့ အပျော်အပါး ထွက်စံတော်မူခိုက်ဖြစ်စေ, အားလုံးသော နေရာတိုင်း၌့ ပြန်ကြားတင်လျှောက်ဆိုမည့် သတင်းပြန်, သတင်းပေး အရာရှိများ ခန့်ထားတည်ရှိကုန်၍့, ငါဘုရင်၏့ ကိစ္စမှုခင်းကို ဖြစ်စေ, တိုင်းနိုင်ငံသူများ၏့ မှုခင်းကိစ္စကို ဖြစ်စေ၊ ငါဘုရင်မင်းတရားအား ပြန်ကြားလျှောက်တင်ကြစေ ဟု အမိန့်ထုတ်ဆင့်တော်မူ၏။ ငါမင်းတရားမြတ်သည် နေရာတကာ အခါခပ်သိမ်းပင် တိုင်းနိုင်ငံသူများ၏့ အကျိူးနှင့်စပ်သော ကိစ္စကို ပြုလုပ်အံ့။
ထို့ပြင် အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက် ထားသည်ကား, ငါဘုရင်မြတ်က တစုံတရာ ပြုလုပ်စီမံခွင့် နှုတ်တော် မြွက်ကြားခြင်းဖြင့် ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ရမည်ဟု၎င်း, တစုံတဦးအား ပြောကြားစေရန်ဟု၎င်း အာဏာမင်းမိန့် ထုတ်ပြန်ထားရှိခဲ့အံ့, ထိုသို့သော အမိန့်သည်ပင်လည်း မှူးတော်မတ်တော်ကြီး အပေါင်းတို့က အဆောတလျင် ပြုလုပ်ဆုံးဖြတ်ရာ၌့ ထားရှိဆွေးနွေးစေရန် ဖြစ်လေသည်၊ ထိုကိစ္စနှင့် စပ်၍့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သော ပရိတ်သတ်အတွင်း၌့ မညီမမျှ ယူဆကွဲးလွဲးကြခြင်း, ပြန်လည်စဉ်းစားထိုက်ခြင်း ဖြစ်ခွင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့အံ့, ငါမင်းတရား၏့ အပါးတော်မြဲး ကိုယ်ရံတော်အား သိစေခြင်းဖြင့် ငါ မင်းတရားအား ပြန်တုန့်လျှောက်တင်ကြစေဟု နေရာခပ်သိမ်း အခါမရွေး ဤအတိုင်း ငါမင်းတရား မိန့်ကြားတော်မူ၏။
ထိုအရေးနှင့် စပ်၍ ထင်းရှားမြွက်ဆိုတော်မူလိုသည်ကား ငါတြားမင်းမြတ်မှာ တိုင်းသာပြည်သူတို့ကိစ္စ၌့ ထကြွလုံ့လစိုက်မှု ပြုလုပ်ရမည်ကို၎င်း, ထိုသို့သော တိုင်းသားပြည်သူတို့ကိစ္စကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ရေးအတွက် ပြုလုပ်ရမည်ကို၎င်း ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ခြင်း အလျင်း ရှိတော်မမူချေ၊ အကြောင်းအမှန် ပြန်ကြားဖွယ်ကား, အားလုံးတိုင်းနေပြည်သူတို့ စည်းပွားတိုးတက်ခြင်းသည်သာ ငါဘုရင်မင်းတရား၏့ လိုအပ်သော ကိစ္စကြီး ဖြစ်လေသည်၊ ထို့ပြင်, ထိုသို့ ဖော်ပြခဲ့သော တိုင်းနိုင်ငံသူတို့ စီးပွားတိုးတက်ရေး မည်သည်လည်း အဖန်ဖန် အထပ်ထပ် ထကြွလုံ့လပြုခြင်း, ဆိုင်စပ်သည့်ကိစ္စကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခြင်း, ဤအရေးသာ ထမြောက်ပြီးစီးကြောင်း မူလဖြစ်လေသည်၊ ထိုသို့ ဖြစ်စေခွင့် သင့်လှပေ၏, အားလုံး နိုင်ငံသုတို့ အစီးအပွားထက် ပိုလွန်သော ကိစ္စတပါးမည်သည် ငါမင်းတရားမှာ အခြားရှိတော် မမူချေ။
“တိုင်းနိုင်ငံသူတို့ အကျိုးတော်ဖြစ် ပြုလုပ်ရေးသာ ငါမင်းတရား၏့ ကိစ္စ”ဟူရာ၌ သိမှတ်ရန်ကား ဤသို့ တိုင်းနိုင်ငံသူတို့ ကိစ္စကို ငါမင်းတရားက ဆောင်ရွက်ပြုလုပ်သော်သာ တိုင်းနိုင်ငံသူတို့က ငါ့အား ကိုးစားရာ မင်းဟု မြတ်နိုးတနာ တင်မြှောက်ထားကြခြင်းအတွက် ၎င်းတို့ ကြွေးမြီမှ လွတ်ကင်းဖွယ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုတော်မူလို၏၊ ထို့ပြင်, ဤပစ္စက္ခတ်၌့ တစုံတရာ ချမ်းသာရခြင်း, နောင်တမလွန်၌့ နတ်ပြည်မှာ ပျော်မွေ့ နစ်ခြိုက်နိုင်ခြင်းလည်း ဖြစ်ရမည်ဟု ဆိုတော်မူလို၏၊ ထို့ကြောင့်, ဤဆိုခဲ့ပြီး အကျိုးအတွက် ဤတရားကျောက်စာကို ကြာမြင့်အရှည်တည်နေစေရန် ထိုတရားအတိုင်း ငါမင်းတရား၏့ သားတော် အစဉ် မြေးတော်အဆက် မြစ်တော်အညွန့် အဓွန့်ရှည်စွာ တိုင်းနိုင်ငံသူတို့ အစီးအပွား၌ အားထုတ်လုံးပမ်းကြစေကုန်၊ စင်စစ် တမူကား ထူးကဲမြင့်မြတ်သော အားစိုက်ခြင်းလုံ့လနှင့် ကင်း၍ ဤတိုင်းသူတို့ အကျိုးကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် ခဲးယဉ်းလှလေသတည်း။—ဆင်ဖြူတော် ကျောက်စာတော်။
Thus saith His Sacred and Gracious Majesty the King: ‘A long period has elapsed during which in the past business was not carried on or information brought in at all times. So by me the arrangement has been made that at all times, when I am eating, or in the ladies’ apartments, or in my private room, or in the mews, or in my [?] conveyance, or in the pleasure-grounds, everywhere the persons appointed to give information should keep me informed about the affairs of the people.
And in all places I attend to the affairs of the people. And, if, perchance, by word of mouth I personally commandadonation or injunction; or, again, whenamatter of urgency has been committed to the High Officers, and in that matteradivision or adjournment takes place in the Council, then without delay information must be given to me in all places, at all times. Such is my command.
Because I never feel satisfaction in my exertions and dispatch of business. For work I must for the welfare of all the folk; and of that, again, the root is energy and the dispatch of business; for nothing is more essential than the welfare of all the folk. And whatsoever efforts I make they are made that I may attain release from my debt to animate beings, so that while in this world I make some persons happy, they may win heaven in the world beyond. For that purpose have I caused this scripture of the Law to be written in order that it may endure, while my sons, grandsons, and great-grandsons may take action for the welfare of all folk. That, however, is difficult save by the utmost exertion.’
နတ်တို့ ချစ်မြတ်နိုးသော ပိယဒသီမင်းကြီးသည် ဤသို့ မိန့်တော်မူ၏၊
လွန်လေပြီးကာလ၌ အခါခပ်သိမ်း အမှုကိစ္စတို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လျှောက်ထား အစီရင်ခံခြင်းဟူ၍ မရှိခဲ့ဘူချေ။ ယခုသော် ငါဘုရင်မင်းမြတ်သည် ဤသို့ စီမံထားလေပြီ။
ငါသည် စားတော်ခေါ်နေသည်ဖြစ်စေ၊ အတွင်းဆောင်၌ ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ စက်ခန်းဆောင်၌ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ သန့်သက်ရာ၌ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ တိုင်းခန်းလှည့်လည်နေသည်ဖြစ်စေ၊ ဥယာဉ်တော်၌ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ နေရာခပ်သိမ်းတို့၌ပင်၊ အခါခပ်သ်ိမ်း နားခံတော်တို့သည် တိုင်းသူပြည်သားတို့၏ အမှုကိစ္စဟူသမျှကို ငါ့အား တင်လျှောက်စေသတည်း။ ငါသည် တိုင်းသူပြည်သားတို့၏ အမှုကိစ္စဟူသမျှကို နေရာမရွေး ဆောင်ရွက်ပါအံ့။
ငါသည် အလှူတော်အမတ်အား၎င်း၊ သံတော်ဆင့်အား၎င်း၊ တစုံတရာကို နှုတ်အားဖြင့် အမိန့်ပေးသောအခါဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်၊ အမတ်ကြီးတို့က ထိုအမိန့်များကို အရေးကြးသဖြင့် တဖန် ဆင့်ဆိုသောအခါ၌ဖြစ်စေ၊ ၀ိဝါဒသော်၎င်း၊ စင်းစားဖွယ်(သံသယ)သော်၎င်း ရှိခဲ့သော် အမတ်အစည်းအဝေးက ငါ့အား လျင်စွာသာလျှင် နေရာမရွေး အခါမရွေး လျှောက်တင်စေသတည်း။ ဤသို့ ငါအမိန့် ချမှတ်ထားတော်မူလေပြီ။
ထကြွလုံ့လပြုခြင်းနှင့် အမှုကိစ္စတို့အား ထမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၌ ငါရောင့်ရဲသည်ဟူ၍ မရှိ၊ ခပ်သိမ်းသော လောက၏ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ရန် ငါရည်ရွယ်လျက်ရှိ၏။ ဤသည်တို့ကား ငါ၏ ထကြွလုံ့လပြုခြင်းနှင့် အမှုကိစ္စတို့အား ထမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့၏ အကြောင်းရင်းတို့ပေတည်း။ ခပ်သိမ်းသော လောက၏ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ တပါး ငါ၌ အခြားဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာဟူ၍ မရှိ။ အဘဲ့ကြောင် ဤသို့ ငါကြိုးစား အားထုတ်ပါသနည်းဆိုသော် ငါသည် မိမိအပေါ်၌ တင်ရှိသော သတ္တ၀ါတို့၏ ကြွေးမှ ကင်းလွတ်၍ ၎င်းတို့အား ဤဘ၀၌ ချမ်းသာကို ရစေ၍ နောင်ဘ၀၌လည်း နတ်ပြည်သို့ ရောက်စေရန် ဖြစ်၏။
ဤအကျိုးငှာ ဤတရားကဗျည်းကို ရေးထိုးစေ၏။ အရှည် တည်မြဲပါစေသတည်း ငါ၏ သားမြေးအဆက်အနွယ်တို့သည် ခပ်သိမ်းသော လောက၏ အကျိုးငှာ အားထုတ်ကြစေကုန်သတည်း။
သည်းစွာ အားထုတ်ခြင်းနှင့် ကင်း၍လည်း ဤအမှုကို ဆောင်ရွက်ရန် ခဲယဉ်းချေ၏။
This entry was posted on April 12, 2008 at 7:35 pm and is filed under စာကိုး, သမိုင်း, အသောကကျောက်စာ.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “အသောကရဲ့ အက္ခရာများ-၆ (အပိုင်း-၁)”
April 14, 2008 at 5:47 pm | Reply
ကောင်းလိုက်တဲ့ သံဓိဌာန် ဗျာ …
April 14, 2008 at 6:32 pm | Reply